Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 27/09/2020)
Kulabo abazi ukuthi banayo kakade, Black Forest iyindawo enkulu esifundeni ezinamahlathi e eningizimu-ntshonalanga Germany. Ngini ngokuqondile, ukuthi etholakala isimo Baden-Württemberg futhi ithatha ingxenye enkulu kakhulu-ke.
I-Black Forest, noma Schwarzwald njengoba kubizwa ngesiJalimane, kukhona izindawo eziningi nge ukubukwa amahle-panoramic. It nayo igcwele emfuleni emangalisa izigodi futhi libalele, langa iphakama wezintaba eziningi ungathola lapha.
Yini enye, uzothola kulo lonke lelo zwe langa futhi Fairytale-like unyaka wonke! Leyo Eqinisweni ngoba kubukeka umxhwele lapho kungcono libalele, liyana, futhi uma kukhona iqhwa. Ungabona ukuthi ngokucacile izithombe kakhulu le ndawo.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/black-forest-by-train/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#blackforest #blackforestgermany izitimela amathiphu isitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela